पतिको गोप्य अं’गमा ते’जा’ब खन्याएर प्रेमीसँग रासलिला गर्दागर्दै रंगेहात समातिइन महिला! (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > बलिउड > पतिको गोप्य अं’गमा ते’जा’ब खन्याएर प्रेमीसँग रासलिला गर्दागर्दै रंगेहात समातिइन महिला! (भिडियो)
admin September 29, 2020 September 29, 2020 बलिउड, रोचक	0
काठमाडौ । प्रेमले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ भन्ने उखान त सुनिएकै हो । मानिस प्रेममा बिचलित समेत हुन्छ भन्ने एक उदाहरण भारतमा देखिएको छ । मेरठ पुलिस स्टेशनको टीपी नगरको मलिआना क्षेत्रबाट एउटा आश्चर्यजनक घटना बाहिर आएको छ । जहाँ एक महिला हरेक रात आफ्नो पति र तीन बच्चाहरूलाई निद्रा लाग्ने औ ष धि खुवाउँथिन् र उनको प्रेमीलाई घरमा बोलाउँथिन् । यो क्रम लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस
अकस्मात यो क्रम प्रहरी कहाँ उजुरी परेपछि रोकिएको छ । उक्त महिलाको पतिको परिवारले आरोप लगाएको छ कि यस बिचमा उनले पतिको गोप्य अं गमा खराब चिज हालिदिईन् जसले गर्दा पतिको अं गले काम गर्न नसकोस् र प्रेमीसँग म स्ती गर्न पाइयोस् । पुलिसले पति शादाबको तर्फबाट उजुरी लिएको छ । जसमा भनिएको छ कि उनकी श्रीमतीले उनलाई र बच्चालाई न सा लाग्ने चिज दिएर राखेकी थिइन् ।
घरका सबै निदाएपछि उनी आफ्ना प्रेमी डाक्टर वसीमलाई घरमा बोलाएर म स्ती गर्थिन् । पछि प्रहरीले ती महिलाका बच्चा पनि पनि बे हो स अवस्थामा फेला परेको थियो । छिमेकका केही व्यक्तिले डा वसीमलाई राती शादाबको घरमा जाँदै गरेको देखेका थिए ।
त्यसपछि यो कुरा ती पुरुषका भाई मोहसिनलाई खबर गरियो र उनी त्यस क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूसँग आफ्नो भाइ शादाबको घरमा पुगे । पुलिसले ती महिलाले पती माथि यस्तो घटना गराएको भन्ने बिषयमा केही भनेको छैन । तर जिल्ला अस्पतालका डाक्टरहरूले यो अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । यो रिपोर्ट आइसके पछि मात्र खुल्ने छ ।
पटनामा रोमान्टिक मोड तव आयो जब महिलाका प्रेमी डा वसीम घरको शौचालयमा लु के । प्रहरी पक्राउ गर्न आए देह त्या ग गर्ने चेतावनी समित दिइन् । प्रहरी आइसकेपछि उनले प्रेमीको अंगमा त्यस्तो बस्तु खन्याइदिइन् । प्रहरीले पत्नी चन्दनी र उनका प्रेमी डा वसीमलाई हिरासतमा लिएको छ र पति शादाब र तीनै बच्चाहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको छ। समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस
सुन्दरताका कारण इन्टरनेटमा रातारात भाइरल भइन यी युवती! हेर्नुहोस तस्बिरहरु